Chii cryptocurrency vari vanoita zano kutengesa, uye izvo munhu kuchengeta? - Blockchain News
Mugumo May ndashamisika kuti crypto indasitiri ane chinozikamwa bearish nevapanduki pamusoro Exchange. Mumakore trimester yaMay, ari TOP-25 cryptocurrency akaratidza oneka kuderera. saka, musi May 22, bitcoin akawira pazasi $ 8000 kokutanga kubva April 18. Eteri uye Bitcoin Cash rikanyura 14% pavhiki, EOS – kubudikidza 6%, uye XRP – kubudikidza 8.5%. The chete weNobel kuti vhiki rakanga TRON (TRX), iyo yakataura zvishoma kuwedzera zvayo prices.
Muitiro imwe huru pamusika zvezvinangwa – nhamba yacho cryptocurrency peya Ethereum uye Bitcoin – uyewo achinja kune pasi mumwe. Nokuda kwaizvozvi, vamwe Altcoins, inobva Ethereum blockchain uye, saka, pamwe runotsamira nzvimbo yayo, ungawa zvikuru kana mwero bitcoin inoramba kusviba. Panguva imwe, tinofanira kugara cryptocurrencies pamusika capitalization kunoderedza kuti $ 322.5 bhiriyoni, sagging ne 14% zvichienzaniswa kuti trimester yaMay rechipiri.
Ndezvipi vatengesi vanofanira kuitei pamusika, waitova kuti bearish netsoka dzakapfava? Recently, asingashumbi vanoita vatova runako nounyanzvi nyaya cryptocurrencies uye vava zvakasimba ichimuudza vatengesi chii kutenga, chii kuchengeta uye chii kutengesa. Kunyange muna January muitiro uyu pakati guru Fiat vanoita haana pachena saka.
Cryptocurrency vanoita vanokurudzira
Semuyenzaniso, Spencer Bogart, mumwe nomumwe ari Blockchain Capital, anotenda kuti mamiriro ezvinhu pari pamusoro exchanges kunobatsira abudirire kutenga. “Sezvo bitcoin achangobva vashandiswe uye kakawanda uye richiri zvakawanda zvechechi, zvakakodzera bhizimisi mariri. All pemahombekombe guru vari kuedza kushanda naye, kupa vatengi vavo. Vamwe rakavhurika zvokutengeserana platforms. A Zvakadzika vachembera kuti bitcoin Kazhinji zvakanaka, “Mukurukuri akati.
Pasinei uchiburuka rinomutsa zvenyika wokutanga cryptocurrency, Bogart ndiye bullish chaizvo remangwana rake. “Anogona bitcoin kuva isingadhuri? zvechokwadi. Asi ndinofunga kuti mune rimwe gore paboka rake richava yepamusoro? nechokwadi, “- akatsanangura mune imwe Bvunzurudzo CNBC.
Positive Zvaifungidzirwa, zvisinei, hadzingoshandi altcoins. “cryptocurrencies vakawanda overvalued uye kuvimbika. Pane mukana kuti vachadaro “fura”, asi vane zvipingamupinyi zvakawanda ichi, “Bogart akati.
Chimwe asingashumbi investor rinokurudzira achitora tikanyatsoongorora Cardano (ADA), TRON (TRX), vara (kubvira) uye OUMAMBO HWECHIPIRI (OUMAMBO HWECHIPIRI).
Sezvineiwo, sezvo ari Ethereum Spencer Bogart anoperekedza nani. “The ndechokuti, pane yakawanda ICO pamusoro Ethereum blockchain. Hazvizivikanwi chii chichaitika mabasa aya uye kuti izvi huchachinja airing Ethereum kosi,” iye akatsinhira. “Pane rimwe divi, Ndingadai kutsigirwa chikwama vatambi zvakadai guru sezvo Ripple, Bitcoin Cash uye EOS.”
Other crypto iyi kuratidza dzakangwarira nani Zvaifungidzirwa. “Zvokuita pamusoro bearish kuitika, izvo, ari svikiro izwi, haina akatsinhira chinhu? Hazvina zvisiri kukodzera kutenga cryptocurrency mu dzokufungidzira kuitira. Kana uchizopa kutora chinhu kwemwedzi mitanhatu kana gore, Saka regai kutora chinhu. Kana uri kutoita vagere-refu Portfolio nzira, ipapo vanobatisisa, nekuti uri pfupi muitiro zviri kujeka kana zvichiita kuti vashambire panze uye kusvetuka zvakare pane imwe nani. mutengo. Kutengesa chete zvine musoro kana uri nyanzvi muzvinashawo. Asi kunyange vanogona kuchinjanisa, saizvozvo, chete michina rebounds, saka chero zvazvingava zviri nani kuti varambe zvinhu. Kazhinji, dzangu dzinoenda ndiko kuteerera altcoins pamwe yakaderera capitalization, nekuti nepamusika zvino pakugadzirisa pasi, uye altcoins mushure bitcoin vari kunyura nguva yakawanda.
Zvokuita mumamiriro ezvinhu ane kudzikira mumusika, mumwe muzvinashawo anozvisarudzira. Chinonyanya kukosha ndechokuti nemazvo kuumba wako cryptocurrency Portfolio uye musavhunduka kana paine nokufamba mumusika. Zvikurukuru akadaro cryptocurrency sezvo vakadaro.